Shapewear ibonelela ngakwicala eliphakathi leSlimming
Ngaba ukhe wambamba esiswini sakho ngaphambili kwaye wawubamba? Ewe, iimpahla zokumila zinokubonelela ngokukhangeleka okwehlayo kwangoko ngaphandle kokuba uchukunyiswe sisisu sakho. Isizathu kukuba iimpahla zokumila ikakhulu zilinganisa isiphumo sokuncancisa ngokuthambisa isisu sakho, indawo yesisu, nothando, ukuhambisa uxinzelelo oluqhubekayo lokukhumbula ukuhlala uncanca.
Iinjongo zexesha elide zoLungelelaniso
Ngelixa unokuba neenjongo zakho zexesha elide njengokufikelela kwisisindo esithile okanye ukujonga imbonakalo yefomathi kunokukubonelela ngeziphumo zokuthoba.
Ezinye iShapewear zibonelela ngoncedo oluhle lwemini yonke ngenkxaso ephakathi ngelixa ezinye zibonelela ngenkxaso engqongqo kwaye zilungile ngokunxiba iiyure ezimbalwa kwizihlandlo ezikhethekileyo ezinje ngemitshato, iipati, imisitho emikhulu, njl. Njl.
Njengoko zinokukunceda ulunge ngokulula nakuphi na ukubopha okuqinileyo okanye ukunxiba okuhamba okanye iingubo. Nokuba ithini imbonakalo yengubo yomzimba wakho inokunceda esinqeni esichazwe ngakumbi.
Isinxibo sinika ukuqiniseka okungakumbi
Ukuzithemba okwandayo mhlawumbi zezona zibonelelo ziphambili kwaye zibaluleke kakhulu ezibonelelwa yimbonakalo yeemilo. Ngaba wakhe weva ngemibandela yokuzithemba kwabathengi? Ukuzithemba kwezoqoqosho, ukuzithemba? Kukho isizathu sokuba ukuzithemba kulinganiswe. Umzekelo, ukuba intengo yabathengi isezantsi abantu bayayisebenzisa ukonga ngaphezulu kwaye basebenzise okuncinci
Ukuba ukuzithemba kwethu kuphantsi sidla ngokuhlala ngaphezulu, phuma kancinci, kwaye kuyaphela kuchaphazela impilo yethu. Oku kunokukhokelela kukungasebenzi kancinci komzimba, ukutya ngaphezulu, ukungaphumi, kwaye kunokukhokelela kuxinzelelo.
Into elula njengokufaka iimpahla zokumila inokukhulisa ukuzithemba kwakho kwaye ikunike loo mda kufuneka uzive ungcono. Xa uziva bhetele ngawe kukhokelela kwingqokelela yezenzo ezincinci ezigqibela zikwenza uzive ubhetele. Uziva wonwabile, uqala ukutya ngcono, ukuzivocavoca ngakumbi, ukuphuma ngakumbi, kunye nokukhupha amandla anomdla atsala kakhulu.
Ukunyuswa kokuma ngandlel 'ithile kunenzuzo engalindelekanga yokunxiba iimpahla zobuso. Abathengi bethu bayayithanda le nto kwaye bayamangaliswa kakhulu kukufumanisa oku. Oku kuyinyani ngakumbi xa kuziwa kukunxiba umqeqeshi esinqeni. Ukwenziwa kwesinqe kunye nokucinezelwa okunikezelayo kuyenza ukuba umva wakho uhlale uqinile.
Oku kukunceda akunandaba nokuba uhleli, ume, okanye uhambahamba ixesha elide. Oku kuhle ukuba unomsebenzi ofuna ukuba uhlale etafileni yonke imihla njengoko uninzi lwabasetyhini luye luyekelele engakhokelela kwiingxaki zomva
Isimo esonyukayo siyinto entle kumqolo wakho kwaye sinokuthintela naziphi na iingxaki zexa elizayo ukuba zivuke. Olunye uncedo olongezelelekileyo lokuma okunikezelayo kungonxibelelwano olungahambelaniyo. Ukubeka nje, ngokuhamba nje kancinci unika inkangeleko yokuzithemba ngakumbi kwaye oku kungathumela imiyalezo enamandla engenamazwi kuye wonke umntu kubandakanya wena. Ngokuma kancinci kancinci kunesiqhelo.
Amaphepha anokunceda ngeeNqanawa zokuya esikhathini
Kungqinwe ukuba imilo yeemilo iyanceda ukunciphisa iintlungu zokuya esikhathini. Ukungabi naxhala lokuva iintlungu xa usebenza okanye xa useluhambeni kuzisa isiqabu esikhulu.
Xa unxiba iimpahla zokumila, abaqeqeshi esinqeni, okanye iicorsets, ukubiyelwa kubeka uxinzelelo kumbindi kubandakanya izitho zangasese ezisisigxina ezinokuncedisa kwisibeleko. Uxinzelelo loku kunciphisa iintlungu kwindawo yecentral.
Isizathu sokuBomi obuNgcono kunye nobuQhelekileyo
Masijongane nengxaki enkulu yokuthoba umzimba, ukuzivocavoca, ukuya kwindawo yokuzivocavoca kuqala kukufumana inkuthazo yokuqalisa. Kwaye emva kokuba siqale sijongana nomceli mngeni wokugcina amandla eqhubeka kwaye ehleli engaguqukiyo.
Oku kuyinyani ngakumbi ukuba unomsebenzi, abantwana, okanye ulwalamano. Ngaba uzikhuthaza njani ukuba ufumane ixesha lokufumana umzimba owufunayo xa udiniwe, uphelelwe lixesha, uxakeke kakhulu, kwaye unezinye izinto engqondweni yakho?
Kunzima ukuqala ukwenza utshintsho, ngakumbi eyona iphambili njengokutya kunye nokuzivocavoca. Kodwa uhambo oluya kumanyathelo aliwaka liqala ngenyathelo lokuqala. Kwaye kulapho ukunxiba iimpahla zokwakheka kungenza umahluko omkhulu. Abantu abaninzi banobungqina obufanayo bokuba xa beqala ngaphandle khange benze naluphi na utshintsho lwendlela bade babone into eyenzelwe bona, kwaye bakuba beyibonile imbonakalo yabo, izincomo abanazo kwaye babenokubona ukuba imizimba yabo inokubonakala njani, yabanika inkuthazo yokuqalisa.
Baqala ukuvuka ngaphambili ukuya kwindawo yokuzivocavoca ngaphambi kokuba baye emsebenzini, bafumana amandla okuhamba emva komsebenzi. Abanye bafika kwiinkqubo zekhaya zokuzivocavoca kwaye bayifaka kubomi babo. Baqala ukwenza ukutya ngaphambi kwexesha kwaye batshintsha ukutya kwabo. Baqala ukwenza ixesha labo njengabasetyhini abaninzi bayalibala ukuzifumanela ixesha lokuzixakekisa ngokwenza izinto zabanye.
Kodwa konke kuqala ngento encinci kwaye into encinci ekhokelela kolunye utshintsho ebomini bakho, emva koko ufumanise ukuba indlela yokuphila esempilweni yinxalenye yobomi bakho kwaye iba sisiqhelo.
Ixesha lokuposa: Aprili-20-2020